နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံခြားပညာသင်ခွင့်အတွက်ပညာသင်ဆု 2021 လျှောက်လွှာစာရင်း - လက်ရှိကျောင်းသတင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ရန်ပညာသင်ဆု (၂၀၂၁) လျှောက်လွှာစာရင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံခြားပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး - နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးအချို့သည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ရန်ပညာသင်ဆုဖြင့်ပညာရေးကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းဒါကိုသိသင့်တယ်
ဒါ့အပြင်ဒီပညာသင်ဆု၏ဘဏ္needsာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများကို။ ဒီပညာသင်ဆုအခမဲ့သော်လည်း, ကျေးဇူးပြု။ သတိပြုပါ အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင်ဖြည့်ဆည်းရမည့်လိုအပ်ချက်များရှိပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဤအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ပညာသင်ဆုဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက / မွမ်းမံမှုများအတွက်ဤဝဘ်ဆိုက်သို့အမြဲတမ်းအခမဲ့ ၀ င်ရောက်ပါ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထိပ်အချို့သည် ပညာသင်ဆု နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံခြားပညာသင်ရန်
၁။ Flanders အစိုးရသည်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် Master Mind ပညာသင်ဆုများ
ဒါထိပ်ပဲ နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာပညာသင်ဆု။ ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ။ ၎င်းသည်ဖလန်းဒါးစ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ Master အစီအစဉ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖလန်းဒါးစ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ကိုထိပ်တန်းလေ့လာရေး ဦး တည်ရာအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်နိုင်ငံအားလုံးမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းသတိပြုပါ။ သို့သော်အသေးစိတ်အတွက်၊ အောက်ရှိလျှောက်လွှာ link သို့ဝင်ပါ။
ဆုခံစားခွင့် - ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်€ 8,000 ။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရမည်။ ထို့အပြင် ၄.၅ အနက် ၃.၅ အနက် GPA တစ်ခုရှိသင့်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းရှိရမည်။ သို့သော်အသေးစိတ်အတွက်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော application link ကိုသွားနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဧပြီလ 30, 2021 ။
လျှောက်လွှာ Link ကို: ဒီမှာကျင့်သုံးပါ
၂။ Bristol University ကကြီးမားတဲ့ပညာသင်ဆုကိုစဉ်းစားပါ
ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာရန်ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို Bristol တက္ကသိုလ်မှထောက်ပံ့ပေးသည်။
Bristol တက္ကသိုလ်သည်ပေါင် ၅၀၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ဒီဟာကအတောက်ပဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကိုလာရောက်ကူညီဖို့ဖြစ်တယ် တက္ကသိုလ်က Bristol က၏။
သတိပြုပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စဥ်းစား ဘွဲ့ကြိုပညာသင်ဆု နှင့် Big Think ဘွဲ့လွန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပညာသင်ဆုများကိုပညာသင်ဆုရရှိနိုင်သည်။
ဆုခံစားခွင့် - ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက်ပေါင် ၅၀၀၀ နှင့်ပေါင် ၁၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိဆုများစွာရရှိနိုင်သည်။ ပေါင် ၅၀၀၀ တန်သောဆုများစွာကိုချီးမြှင့်သော်လည်းဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ပေါင် ၁၀,၀၀၀ နှင့်ပေါင် ၂၀,၀၀၀ ရရှိနိုင်သည်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်နိုင်ငံရပ်ခြားမှကျောင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောသင်တန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်နှစ်အချိန်ပြည့်သင်ကြားပြီးဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်တွင်အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တစ်ခုစတင်ရန်လျှောက်ထားရမည်။ ဒါတွေအားလုံးကို ၂၀၂၁၊ စက်တင်ဘာမှာရှိတဲ့ Bristol တက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဇွန်လ 14, 2021 ။
3 ။ University College London မှအဆိုပါ Denis ဟော်လန်ပညာသင်ဆု
ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာရန်ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည် ဘွဲ့ကြို မည်သည့်နိုင်ငံကနေကျောင်းသားများ။ သို့သော်ကျောင်းသားသည်ကျောင်းသား၏ပံ့ပိုးမှုမပါသောသူဖြစ်ရမည် ပညာတတ် UCL တွင်ပညာသင်ကြားရန်လိုအပ်သည့်ရန်ပုံငွေကိုလုံလုံလောက်လောက်မရရှိနိုင်ပါ။
ထို့အပြင်ကျောင်းသားသည် UCL နှင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှပေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝအသုံးချလိုကြောင်းဖော်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဆုခံစားခွင့် - အဆိုပါပညာသင်ဆု£ 9,000 တန်ဖိုးရှိသည်။ ဒါကတစ်နှစ်ကိုသုံးနှစ်တာပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်တရားဝင် UCL ကျောင်းသားနံပါတ်ကိုကိုင်ထားရမည်။ ဒါ့အပြင်တရားဝင် UCAS လျှောက်လွှာနံပါတ်ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်သည် (UCAS မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မဟုတ်ပါ) နှင့်မဖြစ်မနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်စတင်သောအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုအတွက် UCL သို့ ၀ င်ခွင့်ရရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဇူလိုင်လ 3, 2021 ။
4. ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက်အောက်စ်ဖို့ဒ်ပညာသင်ဆုကို ၂၀၂၁/၂၀၂၂ တွင်ရယူပါ
ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာရန်ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအားကျောင်း၌ပညာသင်ခွင့်ရစေသည် အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်.
Oxford တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဆေးပညာ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ။ ဒီပညာသင်ဆုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကအောက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာလင့်ခ်သို့သွားပါ။
ဆုခံစားခွင့် - ကျူရှင်နှင့်ကောလိပ်ကြေး၊ လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်တစ်နှစ်လျှင်လေယာဉ်လက်မှတ်တစ်စောင်ပါရှိသည်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်နိုင်ဂျီးရီးယားကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ရမည်။ တက္ကသိုလ်ရှိဘွဲ့ကြိုသင်တန်းကိုလျှောက်ထားရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဤအချက်အလက်အတွက်လျှောက်လွှာ link ကိုကြည့်ပါ။
၅။ မြို့တော်ဥပဒေကျောင်း ၁၀၀ သည်ပညာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာဆု
တဖန်ဤသည်နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာဖို့ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ထူးချွန်သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုစီးတီးဥပဒေကျောင်း ၁၀၀ ၏ပညာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်မှုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာသင်ဆုတွင်ပါဝင်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၂၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက်ပြည်တွင်း၊ အီးယူနှင့်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် bursaries များကိုရရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင်စီးတီးဥပဒေကျောင်းဘွဲ့လွန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်လိုသောကျောင်းသားများအတွက်ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကိုချီးမြှင့်သည်။
ဆုခံစားခွင့် - £ ၅၀၀၀ (BVS)၊ ပေါင် ၃၀၀၀ (GE LLB, LPC, LLM) နှင့်£ 5,000 (GDL)
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း (၂း၁ သို့မဟုတ် ၁) ရှိရမည်st) သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီမျှ။ ဒါ့အပြင်ပညာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ CV မှတ်တမ်းများ၊ အသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်မှုသင်တန်းများတွင် BVS, LPC နှင့် LLM အတွက်လျှောက်လွှာတင်သည့်ရက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 10ပြီလ ၁၀ ရက်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း LLB ဖြစ်သည်။
၆။ IOE Centenary Masters Scholarship
IOE သည် ၂၀၂၁/၂၂ ကျောင်းသားများအတွက် Centenary Masters Scholarship ကိုပေးနေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်သူများသို့မဟုတ်၎င်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော၊ ဖယ်ထုတ်ထားခံထားရခြင်း (သို့) မပြည့်စုံသောနိုင်ငံသားများ၏အခြေအနေများကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ နှင့်ပစ်မှတ်ထားအုပ်စုသည်ဝင်ငွေနည်းသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ဝင်ငွေတိုင်းပြည်ကနေကျောင်းသားများကိုဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်အတွက်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်အရေးကြီးသည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်) ။ ဒီပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်မည်သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုခံစားခွင့် - ပညာသင်ဆုသည်ကျူရှင်ကြေးအပြည့်အ ၀ ခံစားရမည်။ ဒါ့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအိမ်၌တစ်နှစ်တည်းခိုရန်နေရာလည်းပါဝင်သည်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည် ၀ င်ငွေနည်းသောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင်အချိန်ပြည့်လေ့လာရန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရှိရမည် မဟာဘွဲ့ UCL ၏ပညာရေးအင်စတီကျု့တွင်လန်ဒန်၌ရှိသည်။ ယူကေတွင်ပညာသင်ခြင်းသို့မဟုတ်နေထိုင်ခြင်းမပြုရပါ။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ,42021 နိုင်ပါစေ။
၇။ ကျောင်းသားများအတွက် Hubert Humphery Fellowships
တဖန်, နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာဖို့ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒါကဒီဂရီမဟုတ်တဲ့ပညာသင်ဆုပါ။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကို USA တွင်ပေးအပ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆယ်လကြာပညာမသင်ကြားမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆက်စပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကို။ သို့သော်၊ သင်သည်အောက်ပါ application link မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိသည်။
ဆုခံစားခွင့် - ကျူရှင်ခပေးတယ် နှင့်သတ်မှတ်ထားသောအိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်မှအခြားအခကြေးငွေ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် အကယ်၍ လိုအပ်ပါကအင်္ဂလိပ်စာမတတ်မီသင်တန်းကိုပေးသည်။ တစ်ချိန်ကအခြေချနေထိုင်စရိတ်အပါအဝင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (လူနေမှု) စရိတ်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရှိရမည်။ ထို့အပြင်၊ အနည်းဆုံးငါးနှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ နှင့် US မှာကန့်သတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမကြိုတင်အတွေ့အကြုံ
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 1st အောက်တိုဘာလမတိုင်မီက။
8။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ DAAD ပညာသင်ဆု
ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာရန်ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်မဟာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကိုဂျာမန်ပညာရေးဆိုင်ရာလဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု (DAAD) မှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသတိပြုပါ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှရရှိသောနိုင်ငံခြားဘွဲ့ရများနှင့်စက်မှုနိုင်ငံအသစ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။ ဒါ့အပြင်သူကစည်းကမ်းအားလုံးဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရများအားပြည်နယ်သို့မဟုတ်အစိုးရအသိအမှတ်ပြုဂျာမန်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့လွန် (သို့) မဟာဘွဲ့ရယူရန်ကူညီသည်။
ထို့အပြင်ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်ပါရဂူဘွဲ့ယူရန်သူတို့ကိုကူညီသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်အဆင့် (Master's / PhD) ရရှိရန်။ သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှလူငယ်ပညာရှင်များကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ဆုခံစားခွင့် - အဆိုပါပညာသင်ဆုတွင်ဘွဲ့ရသူများအတွက်လစဉ်ယူရို ၈၅၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ပါရဂူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ယူရို 850 ။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် လျှောက်ထားသူသည်အများပြည်သူအာဏာပိုင်သို့မဟုတ်အစိုးရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဘွဲ့တစ်ခုရထားရမည်။ ပြီးတော့ပျှမ်းမျှရလဒ်တွေထက်အများကြီးပိုတဲ့ပညာရေးဒီဂရီကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်သူ / သူမ၏ပညာသင်ဆုဘွဲ့6နှစ်ကျော်မဖြစ်သင့်သည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်:သြဂုတ်လ - အောက်တိုဘာလ, 2021 ။
၉။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် Australia သြစတြေးလျပညာသင်ဆု
တဖန်ဤသည်နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာဖို့ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကနိုင်ဂျီးရီးယားအပါအဝင်အာဖရိကန်များအတွက်ပညာသင်ဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယခင်က Australian Development Scholarships (ADS) ဟုလူသိများသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှလူများအတွက်အခွင့်အရေးများပေးသည်။ အထူးသဖြင့်အင်ဒို - ပစိဖိတ်ဒေသရှိနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြို (သို့) ဘွဲ့လွန်လေ့လာရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်သြစတြေးလျားတက္ကသိုလ်များနှင့်နည်းပညာနှင့်နောက်ထပ်ပညာရေး (TAFE) အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဆုခံစားခွင့် - ဤအချက်အလက်အတွက်လျှောက်လွှာ link ကိုကြည့်ပါ။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သတိပြုပါ။ လျှောက်ထားသူများသည်အသက် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပညာသင်ဆုစတင်သည့်နှစ်၏ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပါဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမည်။ သို့သော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော application link မှရယူနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 06/30/2021 ။ သို့သော်နိုင်ငံအများစုအတွက်နောက်ဆုံးနေ့သည် ၂၀၂၁၊ 30ပြီ ၃၀ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား မှလွဲ၍ (Aprilပြီ ၁၅) ။ နှင့်ဗနူတူ (မတ်လ ၃၁) ။
၁၀။ Fulbright နိုင်ငံခြားသားပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာရန်နောက်ထပ်ထိပ်တန်းပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ ၁၅၅ နိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်တွင်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသား ၄၀၀၀ ခန့်လက်ခံရရှိသည်။ သို့သော်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ဤပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်အောက်ပါလျှောက်လွှာ link ကိုကြည့်ပါ။
ဆုခံစားခွင့် - ကျူရှင်ခပေးတယ် ဒါ့အပြင်လေယာဉ်စီးခ ထို့အပြင်၎င်းသည် Stipend နှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံစသည်တို့ကိုပေးသည်။
ရထိုက်ခွင့်ရှိရန် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံသည်နိုင်ငံတိုင်းအတွက်ကွဲပြားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, စစ်ဆေးပါ နိုင်ငံအလိုက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်များအပါအ ၀ င်သင့်နိုင်ငံ၏ Fulbright အစီအစဉ်နှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 10 / 30 / 2021 ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာသတိပြုပါ အထက်ပါအခွင့်အရေးများကိုခဏတဖြုတ်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဤအခွင့်အလမ်းကိုကြာမြင့်စွာမရရှိနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်, စမတ်ဖြစ်နှင့်ယခုလျှောက်ထားပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ဒီအချက်အလက်တွေကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုဝေမျှနိုင်ပြီးချစ်သူတွေကိုလည်းဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ငါနင့်ကိုလိုချင်ပါတယ် ကံကောင်းပါစေ လျှောက်ထားသည်အတိုင်း.
20 နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ္forာရေးပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ Portal 2020
မူလစာမျက်နှာ Prep ကျောင်းအလုပ်အကိုင် Portal 2019 | [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
2019 ဘွဲ့ရများအတွက် CGC နိုင်ဂျီးရီးယားလီမိတက်စုဆောင်းမှု | | အလုပ်အကိုင်များ
အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အုပ်စုစုဆောင်းမှု 2021 လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်နှင့်လိုအပ်ချက်များ
Unisa PGCE လျှောက်လွှာ 2020 - နေ့စွဲများ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်လိုအပ်ချက်များ
OOU လတ်ဆတ်တဲ့လူသစ် Orientation Program အသစ် 2017/2018 Fixed
« Target Scholarship လျှောက်လွှာ Portal ကို collegescholarships.org 2021 Update ကို
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက် Facebook ပညာသင်ဆု 2021/2022 Portal Update »